ဖိုးထက် – ဆပ်ကို ဆပ်ရမယ့် အကြွေးများ | MoeMaKa Burmese News & Media
4 Responses to ဖိုးထက် – ဆပ်ကို ဆပ်ရမယ့် အကြွေးများ
Star Wraith on February 10, 2016 at 12:45 am
Catwoman on February 10, 2016 at 9:31 am
Good article but not all in laws will be like that in real life. I think we should at least support 200$ per month for our parents if not more.
ထွန်းမြင့် on February 10, 2016 at 11:20 am
ကိုဖိုးထက်ရဲ့ သူငယ်ချင်း အေးနိုင်ကို ပြောလိုက်ပါ။ သာဓု ခေါ်ပါတယ်လို့။
မြင်တတ် ရေးတတ်ဖို့ စိတ်အခံ နှလုံးသား အခံ ကောင်းလို့ဘဲလို့ မြင်ပါတယ်။
ကိုဖိုးထက် စာရေး ကျဲလာတယ်။ များ များရေးပါ။ စာမူတွေကိုလဲ မိုးမခ တစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ အခြားတွေကိုလည်း စမ်းပို့ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။
zaw aung on February 11, 2016 at 4:07 pm